PSJTV | पहिलो प्रेम (संस्मरण)
पहिलो प्रेम (संस्मरण)
बुधबार, ०३ असोज २०७५ बच्चु हिमांशु
चिसो हुस्सु चलिरहने बस्तीको बीचमा मेरो विद्यालय थियो। भर्खरै बनेको पक्की भवनको सिरान तल्लामा मेरो कक्षाकोठा पर्थ्यो। उनको कक्षाभने तेश्रो तल्लामा। म मेरो कक्षातिर उकालो चढ्दा उनकै कक्षाको अघि भएर जानुपर्थ्यो। प्रत्येकपटक तेश्रो तल्लामा पुगेर फेरि माथिल्लो तल्लाका लागि भर्याङ चढ्न लाग्दा एकछिन मेरा पाइला अडिन्थे अनि म उनको कक्षातिर हेर्ने गर्थें। उनी कक्षामा हुनु र नहुनुले मेरो यो दैनिकीमा कहिल्यै फेरबदल आएन। त्यसो त म बिहान झिसमिसेमै ट्युसन पढ्न विद्यालय आउँथें। उनीभने विद्यालय समयमा आउने भएकाले बिहान भेट हुने कुरै भएन। तर हाम्रो यस्तो अलगअलग आगमनले उनको कक्षाअगाडी पुग्दा सधैं अडिने मेरो बानीलाई कतैबाट प्रभाव पारेन।
उनी पाँच कक्षामा पढ्ने मेधावी छात्रा। म कक्षा दशमा पढ्ने मेधावी छात्र। कक्षाको हिसाबले हामीमा ठूलो अन्तर भएतापनि म सानैमा माथिल्लो कक्षामा पुगेकाले उनको र मेरो उमेरमाभने खासै अन्तर थिएन। म तेह्र वर्षको थिएँ, उनी त्यस्तै बाह्रकी हुँदी हुन्। विपरीतलिङ्गीप्रतिको आकर्षणका बारेमा उनले केकति बुझेकी थिइन्, त्यो त म जान्दिनँ। मभने यस्तो कुरा बुझ्ने भइसकेको थिएँ। दश कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले यस्तो कुरा बुझ्नु अस्वभाविकपनि थिएन। त्यसैपनि मेरो कक्षामा प्रेममा नपरेका साथीहरु सायदै थिए। कक्षाभित्रकै एकाध जोडीहरुपनि थिए। तर अहिलेको जस्तो खुलेआम प्रेमालाप गर्ने समय थिएन त्यो। धेरै साथीहरुका प्रेम प्रसंगहरु त पछिमात्रै सुनिए। म त सानै थिएँ, त्यतिबेला मसंग प्रेमका कुरा सुनाउने कोही साथी थिएन। एक त म अलि जान्ने विद्यार्थी थिएँ अनि मसंग उनीहरु डराउँथे, अर्कोचाहिं धेरै सानो सोचेर होला, 'यसले मायाप्रेमका कुरा बुझे पो सुनाउनु!' भन्ने सोचेका होलान्। तर वास्तविकता त्यो थिएन। म मायाप्रेमका कुरा बुझ्ने भइसकेको थिएँ। अनि मैले कसैलाई हृदयदेखि मन पराउनपनि थालिसकेको थिएँ।
उनीप्रतिको मेरो आकर्षण कुन दिनबाट सुरु भयो, यो मलाई याद छैन। यसको खास अर्थ छजस्तोपनि मलाई लाग्दैन। उनी असाध्यै तीक्ष्ण दिमागकी विद्यार्थी थिइन्। विद्यालयमा हुनेगरेका साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा म सधैं प्रथम हुन्थें। उनी कक्षा पाँचमामात्रै पढ्ने भएरपनि द्वितीय वा तृतीय स्थानमा आइरहन्थिन्। अन्य अतिरिक्त कृयाकलापहरुमापनि पछि नहट्ने उनको स्वभाव थियो। सायद उनको यही एउटा प्रमुख गुण थियो, जसले मलाई उनीतिर चुम्बकले फलामलाई तानेजसरी आकर्षित गर्थ्यो। शालिन स्वभावकी उनी बोल्नमा अतिनै शिष्ट थिइन्। उनको नाकको देब्रेतिरको सानो कोठी अझैपनि मलाई याद छ। मुहारमा अद्भुत चमक भएकी उनलाई मैले सिधा नजरले कहिल्यै हेर्न सकिनँ। उनका चम्किला आँखाहरु कुनै स्वर्णीम भविश्यतिर अर्जुनदृष्टी दिइरहेजस्ता देखिन्थे। उनको ओठ फूलबारीमा भर्खरै कोपिलाबाट फक्रेको गुलाबजस्तो कोमल र गुलाबी प्रतीत हुन्थ्यो। उनको निधारमाथि घुम्रिएका कैला कपालहरु याद गर्छु म यतिबेला। उनका सलक्क परेका हातहरु, जो सधैं कापी र कलमसंग खेलिरहेका हुन्थे, ती परिश्रमी हातहरु सम्झन्छु म यतिबेला। उनको शरीरभने उतिसारो याद गरिनँ मैले। तर उनको हिंडाईको चाल मलाई अतिनै प्रिय लाग्थ्यो। उनी हिंडेको म लुकीलुकी हेर्ने गर्थें। अचेल भनिने गरेजस्तो क्याटवाक थियो वा थिएन त्यो हिंडाई, यो म जान्दिनँ। तर भविश्यको अवश्यम्भावी सफलताको शिकार गर्न निस्किएकी एक मानवरुपी 'सिंहिनी'को भन्दा फरक हुँदैनथ्यो उनको हिंडाई।
टिफिनको घण्टी बजेपछि मेरो मनमा एउटै कुरा खेल्थ्यो। उनको कक्षामा जाऊँ र उनीसंग कुरा गरुँ। म मौका मिलेसम्म उनको कक्षा भएतिर झरिहाल्थें। उनी सधैं कक्षामै बसेर केही लेखिरहेकी हु्न्थिन्। कहिले हिसाब सिकिरहेकी, कहिले किताब पढिरहेकी, कहिले हस्तलेखन सिकिरहेकी, यस्तैयस्तै अवस्थामा म उनलाई भेट्थें। म त्यहाँ आउने कारणबारे सबैजना अनविज्ञ थिए। म किन त्यहाँ सधैं आउने गरेको छु भन्ने कुरा सोध्ने मान्छेपनि थिएन। म जान्ने विद्यार्थी भएकाले म आउनु उनीहरुका लागि सकारात्मक कुरानै हुन्थ्यो सायद। मेरापनि त्यस्तै बहानाहरु हुन्थे। कहिले म कुनै किताब माग्न त्यहाँ पुग्थें, कहिले हालखबर सोध्न, त कहिले अकारण। तर मेरो उद्देश्यभने सधैं एउटै हुन्थ्यो, उनको एक झलक पाउनु। केवल उनलाई एकचोटी हेर्न र उनको बोली सुन्नलाई म उनको कक्षासम्म पुग्थें। उनी मसंग खासै बोल्दिनथिन्। बिनाकाम कसैसंग बोल्ने उनको बानी थिएन। तर उनले साथीहरुसंग बोलेकोमात्रै सुन्नपनि मेरा कानहरु प्रतीक्षारत हुन्थे।
'फूल बनी फुलिदियौ मनको मझेरीमा
जून बनी छाइदियौ रातको अँधेरीमा'
यी हरफहरु उनलाई समर्पण गरेर मैले कापीको पानामा कतै लेखेको थिएँ। मेरा किताबका सुरुका नपढिने पृष्ठहरुमा यस्तै सायरीहरु लेखिएका हुन्थे। कापीका पानाहरुमा उनलाई याद गरेर लेखिएका अनेकौं पंक्तिहरु हुन्थे। त्यो त्यस्तो बेला थियो, मलाई उनको सम्झना आउँदा एउटा नयाँ गजल फुर्थ्यो। दिनमा दुईचार नयाँ कुराहरु फुरेकै हुन्थे। प्रेमका कुरा कविता र गजलमा उतार्न सिकिरहेको थिएँ म त्यतिबेला। खासमा ती सबै कुरा उनको सम्झनामा लेखिएका मिठा अनुभूतिहरु थिए। तर मैले लेखेका प्रेमील कुराहरु उनलाई समर्पण गरेर लेखिएको भनेर भन्ने हिम्मत मैले कहिलेपनि गरिनँ। उनी आफैंले त्यो थाहा पाउने कुरा भएन। म यस्ता सृजनाहरु अप्रतियोगी रचनाका रुपमा मञ्चमा सुनाउने गर्थें। मैले उनलाई मन पराउने गरेको कुरा सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै थाहा थियो। तिनले यो पोल अरुसामु कहिल्यै खोलेनन्। तर एक पात्र थिइन्, जसको घरमा म डेरा गरेर बसेको थिएँ। मैले मन पराएकी केटीको बारेमा कुरा गर्दा उनी यसरी रिसाउँथिन् कि, मानौं उनीचाहिं खासमा मलाई चाहन्थिन्। यी पात्रपनि मेरै विद्यालयकी एक अद्भुत छात्रा थिइन्। तर उनीप्रति मलाई त्यस्तो प्रेमील आकर्षण कहिल्यै भएन। उनकै घरमा बस्ने भएकाले र उनीपनि एक मेधावी विद्यार्थी भएकीले उनीप्रति उच्चसम्मानचाहिं अवश्य थियो। मैले अर्को मान्छेको कुरा गर्दा उनी रिसाएको देखेर मलाई आनन्द आउँथ्यो। सायद उनीपनि आफूलाई अरुभन्दा कमजोर सोच्दिनथिन्। या सायद उनीचाहिं मलाई साँच्चिकै मन पराउँथिन्। यो सब कुराको कुनै अर्थ रहेन यतिबेला। अब उनी अर्कैकी भइसकिन् र हामीले एकअर्कालाई नभेटेकोपनि एक दशक नाघिसक्यो।
विद्यालय जीवनमा उनीप्रतिको आकर्षणलाई मेरा शब्दहरुमा अभिव्यक्त गर्नेबाहेक अरु विकल्पमा म जान चाहिनँ, या भनौं जान सकिनँ। उनी केवल मैले रचना गरेका कविता र गजलमा कैद भएर रहिन्। यसरीनै मेरो विद्यालय जीवनपनि समाप्त भयो। आफूभित्र अङ्कुरित प्रेमको त्यो अनुपम अनुभूतिलाई यादहरुको ऐतिहासिक दस्तावेजभित्र कैद गरेर उनीबाट टाढा भएँ म। त्यसपछि वर्षौंसम्म उनीसंग भेट भएन। उनलाई मनका कुरा भन्न नसकेको एक गतिलो कारण के थियोभने, प्रेमका कुरा गर्नलाई उनी धेरै सानी थिइन्। उनको पठनपाठनमा अवरोध सृजना हुनसक्ने कुनैपनि कृयाकलाप मबाट हुनुहुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो। उनी बुझ्ने उमेरमा पुग्छिन् र म त्यतिबेला मेरा सबै कुरा भनूँला भनेर बसें। तर त्यो दिन कहिल्यै आएन। उनलाई विद्यालय जीवनको केही वर्षपछि भेटें मैले। उस्तै उनी, उस्तै उनको चाल। टाढैबाट हेरें र चित्त बुझाएँ। उनलाई एकपटक हेर्नकै लागि धेरैपटक उनको घरसम्म अनेकौं बहानामा पुगियो। उनी विद्यालय जाने गरेको बाटोमा कुरेर बसियो। तर उनीसंग बोल्ने हिम्मत कहिल्यै भएन। अब त उनको बुझ्ने उमेर भयो होला भन्ने सोचेर एकदिन उनको नाममा एउटा प्रेमपत्र लेखेर पठाएँ।
हृदयको अन्त:करणबाट तिमीलाई न्यानो सम्झना।
यो पत्र लेख्दैगर्दा यतिबेला म त्यो नारीपात्रलाई याद गरिरहेको छु जसको एक झल्को देख्नकै लागि म प्रत्येक दिन हाम्रो विद्यालयको टिफिनको घण्टी कुरेर बस्थें। म त्यो अद्भुत छात्रालाई याद गरिरहेको छु जो हरेक प्रतियोगिताहरुमा मविरुद्ध खरो उत्रिन्थिन्। मेरो स्मृतिमा त्यो नारीआवाज प्रतिध्वनित भइरहेछ, जुन आवाजको माधुर्यले म मोहित हुनेगर्थें। मान्छेहरु अप्सरा र परीको कुरा गर्छन्। तर वास्तविकतामा तिनलाई देख्ने कोही थियोभने त्यो म थिएँ। यतिबेला यसो भन्दैगर्दा तिमी मेरो शब्दजालमा अल्झिएकी हुनसक्छ्यौ। तर म यो बताउन खोजिरहेको छुकि, त्यो नारीपात्र अरु कोही नभएर तिमी थियौ।
आज वर्षौंपछिपनि तिमीप्रति मेरो आस्थाका बारेमा आफैंलाई प्रश्न गर्नेगर्छु म। तर तिमीप्रतिको आकर्षण र सम्मानमा रत्तिभर फरक पाएको छैन मैले। हिजो तिमी अबोध थियौ र मैले यस्ता कुराहरु राख्नु किमार्थ उचित थिएन। आजसम्म आउँदा तिमीले यो संसारलाई धेरै बुझिसकेकी छ्यौ भन्ने मेरो निचोड छ। आजपनि तिम्रो एक झल्को पाउन मेरा नयनहरु उत्तिकै लालायित हुन्छन्। तिम्रो एक शव्द सुन्न मेरा कानहरु उत्तिकै व्यग्र हुन्छन्। उस्तै छ तिमीप्रतिको आकर्षण। उस्तै छ मभित्रको अनुभूति। अनि मेरो अनुपस्थितिमा तिमीले प्राप्त गरेका अनेकौं सफलताहरुको इतिहास म नेप्थ्यमा बसेर पढिनै रहेको छु। तिमीलाई असिम प्यार र बधाई। जिन्दगीका अनेक घनघस्याहरु बेपर्वाह काट्नसक्ने अदम्य उर्जा तिमीमा सदासदा रहिरहोस्, मेरो शुभकामना सधैं तिमीलाई।
प्रिय, हामीबीच यतिका समयको दुरीपछिपनि मलाई रत्तिभर लागेको छैनकि तिमी मबाट टाढा भयौ। आजपनि तिमीलाई समर्पण गरेर लेखिएका ती हरफहरु पढ्नेगर्छु म। मैले रोपेका ती फूलका बीजहरुले सुन्दर फूलहरु फुलाउन लागेजस्तो प्रतीत हुन्छ। मेरो प्रतीक्षाको प्रत्येक क्षणले कुनै ऐतिहासिक विजयोत्सवको तयारी गरेजस्तो मलाई लाग्छ। तिम्रो निजी जिन्दगीको फेहरिस्तको कुनै ज्ञान या अनुमान छैन मलाई। तर किन मेरो मश्तिष्कको प्रत्येक अंश र मेरो मुटु यति ढुक्क भएका छन् कि तिम्रो दिलमा कोही अरु छैन? म यो प्रश्नको जवाफ जान्दिनँ प्रिय।
आज धेरै वर्षपछि तिमीलाई यसअघि कहिल्यै नभनेको कुरा म यसै पत्रमार्फत भन्दैछु। तिमी मेरो युगकी पहिलो नारीपात्र थियौ, जो मेरो मुटुमा पहिलो परिचय बनाएर बस्यौ। एकोहोरोनै सही, मेरो पहिलो प्रेम तिमी भयौ। आजसम्मपनि मभित्र तिमीप्रतिको उस्तै लगावको आत्मानुभूति रहेकाले मेरो चाहना यो पहिलो प्रेमलाई मेरो एकमात्र प्रेम बनाउनु हो। म भन्न सक्दिनँ, यो कतिसम्म सम्भव छ।
मेरा भावनाहरुलाई तिमीले आत्मसात गर्न सक्छ्यौभने यति सोचिदेऊ, यो पत्रको जवाफ कुरेर पृथ्वीको एक कुनामा एक प्रेमील मन व्यग्रताका साथ बसिरहेको छ। तिम्रो स्वीकृति या अस्वीकृति भन्दापनि तिम्रा भावनाहरु तिम्रै शब्दमा पढ्ने एक मौका दिनेछ्यौ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
आफ्नो मिठो मुस्कानले सधैं सकारात्मकता बाँडिरहनू। तिम्रा लागि माङसंग तिम्रो सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको बरदान मागेको छु मैले।
उही तिमीलाई माया गर्ने......'
यो पत्र उनकै कक्षामा पढ्ने मेरो भाईलाई मैले थमाएँ। उसले दिनेपनि कुरा गर्यो। ऊ छात्रवासमा बस्ने भएकाले धेरै समय हाम्रो भेट भएन। ऊ घर आएको बेला बडो नमिठो जवाफ लिएर फर्कियो। डराएर उसले पत्र त दिनै सकेनछ। त्यो पत्र मैले मसंगै राखिरहें। तर उनीसंग फेरि कहिल्यै प्रत्यक्ष भेट भएन। पर्सभित्र जतनका साथ धेरै वर्षसम्म राखिएको त्यो पत्र मेरो पहाड घरको किताबका ठेलीहरुमा कतै च्यापिएर अझैपनि बसिरहेको हुनुपर्छ। त्यो पत्रमा सम्बोधन गरिएकी नारीपात्रभने यतिबेला कहाँ छिन्, त्यो जानकारी मलाई छैन।
धेरैपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी मसंग जोडिइन्। उनको बारेमा विस्तारै थप कुरा थाहा हुँदैगयो। उनले साँच्चिकै प्रगतिका अनेक शिखरहरु चुमिसकिछन्। उनीप्रति मभित्र थप सम्मान जागेर आयो। तर उनी परिपक्व भएपछि आफ्ना कुरा भनूँला भनेर बसेको त त्यतिन्जेल धेरै अबेर भइसकेछ। उनले त आफ्नो मनमा अर्कैलाई राखिसकिछन्। उनले मलाई सधैं एक सम्मानित दाईको रुपमा सोच्ने गरेको कुरा मैले बुझ्दै गएँ। यस्तो भइसकेपछि उनको पछि लागिरहनुको खास अर्थपनि रहेन। प्रसंगवस, एकदिन मैले बाल्यावस्थाका ती मिठा पलहरुको बारेमा उनलाई पुनरावृत गराएँ। उनले ती कुराहरुमा खास चासो दिइनन्। अनि विस्तारै हाम्रो सम्पर्कपनि घट्दै गयो। आजको मितिसम्ममा उनीसंग संवाद नभएको बीस महिना भइसकेछ।
आज एक महिला साथीसंग कुराकानीकै क्रममा पहिलो प्रेमको प्रसंगपनि आयो। मेरो पहिलो प्रेम उनीनै थिइन् र मैले उनकै बारेमा कुरा राखें। उनीभने मलाई कति याद गर्छिन् होला, कि गर्दिनन् होला, यतिबेला यो सोचिरहन जरुरी ठानिनँ। उनी जहाँ जस्तो अवस्थामा भएपनि मेरो यो कविताको प्रत्येक हरफमा सदियौंसम्म बाँचिरहनेछिन्:
'तिमी सुनगाभा हौ
जो मेरो लेखान्तको
अजेय तारेभीरमा फुलेकी छ्यौ
म त्यसैको फेद भएर
सधैं ओहोरदोहोर गरिरहन्छु
तिमी फुलिरहन्छ्यौ प्रत्येक याम
उस्तै सुवासित अदाका साथ
उस्तै अद्वितीय सौन्दर्यका साथ
उस्तै पवित्र यौवनका साथ
अनि म प्रार्थना गरिरहन्छु
तिमी यसरीनै सदासदा फुलिरहनू
जीवनयात्राको अथक बटुवा भएर
तिम्रो स्नेहको मृगतृष्णा खोज्दै
मभने तिमी फुलेकै भीरमुनी
टाढैबाट असिम प्यार र लाखौंलाख शुभकामना, 'पहिलो प्रेम' तिमीलाई!
कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमित बिरामी भेटिएपछि पुरै देश ‘लकडाउन’ भएलगत्तै सबै सुरक्षा अंग हाई अलर्टमा बसेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामी फेला परेलगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हाई अलर्टमा ...